Ndị na-emepụta karama mmanya na-eme mkpọtụ, ndị na-ebunye ya - China Glass Lotion Bottle Factory
Efu Refillable Cucurbit Ekeziri Amber Glass Ude mgbapụta karama na Black Dispenser Head na Cap
Rewghasa akara, ọma oru arụmọrụ, ị na-adịghị na-echegbu onwe banyere ọdịnaya awụfu. Obere ma adaba. Mfe ibu, zuru okè njem. Mfe ọcha na reusable. Kwesịrị ekwesị maka juputa mmiri, ude, ihe otite, mmanụ dị mkpa, ngwaahịa nlekọta anụ ahụ, moisturizers na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ ndị ọzọ.
30ml na 50ml maka nhọrọ gị,
500ml Efu ncha ntutu mgbapụta karama Glass Refillable Bottle maka ncha ntutu, Isi Saa, ncha, Lotions, mmanụ
Jiri ncha ncha a meziwanye ime ụlọ ịwụ ahụ ngwa ngwa. A na-eji ncha eji eme ncha a nke iko siri ike na ahụ na-egbuke egbuke nke dị mfe ịhụ, na mgbapụta igwe anaghị agba nchara na-enye gị ezigbo mmiri mmiri oge ọ bụla, na-eme ka mgbochi gị dị njọ. Nke a vasatail iko ncha dispenser nwere ike mfe Integrated ọ bụla ẹdude mma, na ike icho mma ọ bụla na nkuku nke ụlọ gị, si kichin na ụlọ ịwụ counter na ọbụna gị asacha efere. Jiri ihe eji achicha achikota iji meputa ikuku nke oge a ma di mfe n’ime oghere gi.
100 Efu Refillable Frosted Glass Pump Bottles Container F r Bath Shower Shampoo Hair-Conditioner Cleanser Makeup Liquids
Ncha ntutu na-enweghị BPA, ude mmiri, mmiri mmiri, ude, ụfụfụ, ncha ntutu na ihe ndị ọzọ.
Kalama ahụ zuru oke iji tinye ya na ncha ntutu, gel ịsa ahụ, ude mmiri, wdg.
Ngwaahịa ụlọ bara ezigbo uru ma baa uru. Inogide na ike ga-eji ruo ogologo oge;
Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta,